Vibenomics Audio Kunze-Kwe-Kumba Kushambadzira: Yakasarudzika, Nzvimbo-Yakavakirwa Mimhanzi uye Messaging | Martech Zone
Vibenomics Audio Kunze-Kwe-Kumba Kushambadzira: Yakasarudzika, Nzvimbo-Yakavakirwa Mimhanzi uye Messaging
Mugovera, Kukadzi 24, 2018 Chipiri, Kurume 8, 2022 Douglas Karr
Prime Car Wash CEO Brent Oakley aive nedambudziko. Mawachiro ake emota dzemhando yepamusoro zvakamunakidza, asi vatengi vake pavakanga vakamirira pamota yavo, hapana aivaudza nezvezvigadzirwa zvitsva nemasevhisi avaifanira kupa. Akagadzira chikuva kwaaigona kurekodha akasarudzika, nzvimbo-yakavakirwa mameseji uye mimhanzi kune vatengi vake.
Paakatanga kusimudzira machira egirazi emhepo achitsiva nhepfenyuro yechitoro, akatengesa akawanda maowers mumwedzi mumwe kupfuura zvaakatengesa mumakore mashanu apfuura. Brent aiziva kuti aisangova nemhinduro yevatengi vake, aive neplatform iyo indasitiri yaida. Nekudaro, akasiya bhizimusi rekuwacha mota ndokutanga Vibenomics.
Vibenomics inzvimbo-yakavakirwa Audio Out-of-Home ™ kushambadzira uye ruzivo kambani inopa masimba edhiyo chiteshi kune vatengesi, ichipa ma brand kugona kutaura nevatengi zvakananga panzvimbo yekutengesa. Iine tekinoroji yayo ine simba-yakavakirwa gore, raibhurari yemimhanzi ine rezinesi, kugona kwekubatanidza data, timu yakazara-sevhisi yenyanzvi dzeruzivo rwekuteerera, uye network yevanoda tarenda rehunyanzvi rezwi, kambani inopa mvumo yekuwedzera mari kune vanopfuura zana nemakumi mashanu vanoshambadzira. nzvimbo dzinopfuura 150 munzvimbo makumi mana nemapfumbamwe, dzichisvika pamusoro pe6,000 miriyoni vanhu.
Zvitoro zvekutengesa zvinowanzobhadhara marezinesi emimhanzi mhinduro, asi Vibenmoics inopa mimhanzi uye meseji mhinduro ine kudzoka pakudyara.
Vibenomics inopa mabhizinesi kuwana kuraibhurari ine rezenisi yakazara yemimhanzi uye iri nyore-kushandisa-app inovabvumira kuendesa uye kugamuchira zvakagadzirirwa, zvakarekodhwa zviziviso zuva rimwe chete raunokumbira. Mabhizinesi haafanire kunetseka nezve bandwidth kana tekinoroji nyaya - chikuva chinomhanya pamahwendefa eSprint-powered. Ingoiisa mukati, uye wasimuka uye uchimhanya!
Inonunurwa kuburikidza neinochinjika plug-uye-kutamba, proprietary, IoT yakagonesa midhiya vatambi, Vibenomics inofambisa nhepfenyuro ye hyper-yakatarwa, pane-inoda odhiyo kushambadzira uye curated playlists mukati mechero musanganiswa wenzvimbo munzvimbo yayo inokurumidza kukura yenyika tsoka, kuvhura ine simba nyowani yekushambadzira chiteshi. yekusvika vatengi panguva dzakaoma dzekupedzisira nhanho munzira yekutenga. Kuburikidza nepurogiramu yekutanga-ye-yayo-yemhando yekudyidzana, vatengesi vanogona kugamuchira chikamu chemari kune ese kushambadzira kunotengeswa neVibenomics inotamba mukati menzvimbo dzavo, ichivapa kugona kuita mari yavo yakavanzika airwaves uye kushandura mari yenhaka kuita nzvimbo itsva yepurofiti. .
NeVibenomics, mabhizinesi anogona kutyaira mhedzisiro yebhizinesi:
Pushira zvigadzirwa nekukurumidza uye wedzera mukana wemari kune wese mutengi.
Dzidzisa vatengi pazvinhu zvitsva uye zvinopihwa sezvavanowanikwa
Dhiraivha vatengi kune yako webhusaiti yemaponi uye kukwidziridzwa
Kwete chete mabhizinesi anogona kushambadza mameseji avo, asi anogona zvakare kuvhura network yavo kune vechitatu-bato vashambadzi! Tarisa yavo zvingaitwa kudzidza zvakawanda nezve ivo vanogona kubatsira indasitiri yako.
Teerera kune yedu Kubvunzana naBrent Kumbira Vibenomics Demo
Tags: aoohaooh advertisingmailmumhanziOOHooh advertisingkunze-kwe-kumba advertisingredhiyo networkchitoro odhiyovibenomics